iSAVER + ungowokuqala Isikrini imvamisa Converter embonini pool, umkhiqizo yomzamo wethu ngokufuna emisha okuqhubekayo ukuze linikeze umuzwa ikhasimende kangcono.
Pump, ngokuba umsebenzisi eyodwa enkulu kagesi yokuhlala, ibusa hhayi kuphela amandla lokho akudingekile, kodwa futhi yakha umsindo njalo okuyinto evamile ngenhla 60, ngezinye izikhathi ngisho kufika ku-70 DBA. iSAVER + pool futha inverter kuyinto ikhambi ekahle kwagezi futhi umcucuzo ethule.
Nge timer yayo umsebenzi, ungabuka ukusebenzisa futha ngesivinini njalo, noma usethe ukuba 4 izikhathi umsebenzi nsuku zonke, ngayinye ijubane ngabanye. Nge-80% ukulondolozwa ngesivinini ongaphakeme, ngisho noma egijima ke amahora angu-24 ngosuku ngesivinini ongaphakeme, wena namanje ukukhokha engaphansi. A amandla ukusetshenziswa ekufundeni esibukweni ukunikeza umqondo ukuthi angakanani amandla futha usebenzisa ngaphansi isivinini ezahlukene.
Easy kulondolozwa ku-80% ngesivinini ongaphakeme
Izinga Sound of futha kwehle ngo-25%
Isilinganiso Akuphoqelekile efanelekayo zokusebenza ezahlukene
Kungcono filtration ukusebenza ngesivinini ephansi, amakhemikhali kancane okudingekayo
A eside isikhathi sokuphila ngoba imoto nezinye izinto pool
umnikelo Omkhulu ekunciphiseni GHG
Izindleko isixazululo ngempumelelo
Kuncike esimweni ngabanye, buyiselani isikhathi kungaba esingaphansi kwezinyanga ezingu-12. Lapha ngezansi kuyinto ukubala anolaka ingakanani ungagcina ngonyaka nge iSAVER + inverter yokubhukuda futha ezifakiwe.
Imindeni nge echibini 50m³ ukubhukuda ngokuvamile ifakwe 1HP (0.746kW okokufaka) pool futha.
Ingakapheli inyanga eziyisikhombisa ukubhukuda isizini, ukusetshenziswa kwezimali ngonyaka € 752 Emva kokufaka i iSAVER + inverter ohlelweni, ukusetshenziswa kwezimali ngonyaka € 169
Savings Lonyaka = € 583
- I- Swimming Pool Pump inverter
- I- Variable Speed ​​Pool Pump Isikhathi
Amandla wokufaka 1ph AC 1ph AC 1ph AC 1ph AC
wokufaka Voltage 220V ~ 240V 220V ~ 240V 220V ~ 240V 220V ~ 240V
imvamisa 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
lokukhipha Voltage 1ph, 0 ~ 240V 1ph, 0 ~ 240V 3PH, 0 ~ 240V 3PH, 0 ~ 240V
lokukhipha Amandla Max 1 kW Max 2.2kW Max 1kW Max 2.2kW
lokukhipha yamanje Max 5.5A Max 12A Max 4A Max 8a
zokufaka Isilinganiselwa IP65 IP65 IP65 IP65
Uhlobo Pump isigaba Single isigaba Single Three isigaba Three isigaba
Speed ​​Ibanga 1200 ~ 2900rpm
Joyina i-Global yethu Inethiwekhi Distributors!
Copyright @ AQUAGEM Wonke Amalungelo Agodliwe